देशैभरका कर्मचारीहरुलाई एकाबिहान नेपाल सरकारबाट आयो यस्तो महत्त्वपूर्ण सुचना : – Life Nepali
देशैभरका कर्मचारीहरुलाई एकाबिहान नेपाल सरकारबाट आयो यस्तो महत्त्वपूर्ण सुचना :
काठमाडौं। देशमा कोरोना संक्रमण विस्फोटकरुपमा फैलिएसँगै सरकारले घटस्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमासम्म सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्न तयारी गरेको छ। कोभिड १९ महामारी व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शनिबार बसेको बैठकमा घटनास्थापनाको दिनदेखि सरकारी कार्यालय बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको स्रोतले बताएको छ। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
सेनाले लकडाउन खुकुलो र लकडाउन अन्त्यको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोरोना तिब्ररुपमा फैलिएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। सेना देशमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सेनाको भनाईमा समर्थन जनाएको स्रोतले बतायो। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous Breaking – रोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा हुने मिति तोकियो !
Next दशैको अवसरमा आयो आकर्षक पल्सर बाइक ! मुल्य सुन्दा सबै चकित !